စိတျဝငျစားဖို့ ကောငျး လှတဲ့ မငျးသမီးခြော အိန်ဒွာကြျောဇငျ ဖွတျသနျး ခဲ့ရတဲ့ သူမဘဝ အကွောငျး – Let Pan Daily
Let Pan | October 18, 2021 | Celebrity | No Comments
အားလုံးက ခဈြစနိုးနဲ့ အူဝဲလို့ ချေါတဲ့ သူမ ကိုတော့ ၁၉၇၇ခုနှဈ၊ ဧပွီလ ၂၄ရကျ နမှေ့ာ မှေးဖှားခဲ့ပါတယျ.. မိဘတှကေတော့ ဦးကြျောဇငျနဲ့ ဒျေါမွသီတာတို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ မှေးခငျြးသုံးဦးရှိပွီး သူမက တော့ အငယျဆုံးဖွဈပါ တယျ။ သူမရဲ့ဇာတိက တော့ ရနျကုနျမွို့ ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့မိဘမြိုးရိုးကို ကွညျ့မယျ ဆိုရငျတော့ သူမဟာခုထကျထိ နာမညျကြျောကွားနဆေဲဖွဈတဲ့ စာရေးဆရာကွီး ဒဂုနျတာယာရဲ့တူမ ဖွဈပါတယျ။
ရဲဘျောသုံးကြိပျအဖှဲ့ဝငျဗိုလျဇယေရြဲ့မွေး တျောစပျသူ လညျး ဖွဈပါတယျ.မငျးသားကွီးကောလိပျဂငျြနဝေငျး တူမတျောစပျဖွဈပွီး ရာဇာနဝေငျးနဲ့ ဟမောနဝေငျးတို့နဲ့လညျး အမြိုးတျောစပျသူပဲဖွဈပွီး ပိုငျဇရေဲထှနျး မောငျနှမဝမျးကှဲ တျောစပျသူဖွဈပါတယျ ။ သူမရဲ့အပွုံးခြိုခြိုလေးတှနေဲ့အတူ သရုပျဆောငျ ကောငျးမှုတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ရငျ ထဲမှာနရောတဈ နရောကို ယူထားနိုငျပွီးအကယျ ဒမီဆုတှကေို ရရှိခဲ့သူဖွဈပါတယျ။ အနုပညာလမျးကွောငျးပျေါမှာလြှောကျလှမျးနရေငျးနဲ့ မွနျမာ့မငျးသားထဲမှာထိပျဆုံးကအောငျမွငျနတေဲ့မငျးသားဖွဈသူပွတေီဦး နဲ့ရှလေကျတှဲပွီး အောငျမွငျပွီးလူတိုငျးက အားကရြတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို သမီးလေးတဈယောကျ သားလေးတဈယောကျကို ပိုငျဆိုငျထားသူလညျး ဖွဈပါတယျ။
သူမကတော့ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးအဖွဈ ရမှေေးနဲ့ အိတျတှေ ကိုလညျး သူမအမညျ နဲ့တငျသှငျးတဲ့အလု ပျကိုလ ညျး လုပျကိုငျနသေူဖွဈပါတယျ။ခုလကျရှိမှာတော့ သူမရဲ့ကိုယျထဲမှာ စီးဆငျးနတေဲ့မတရားမှုကို ငွိမျကွညျ့နလေို့အဆငျမပွတေဲ့အတှကျကွောငျ့ သူမတို့ဇနီးမောငျနှံကတော့ အဖမျးခံထား၇တာ ဖွဈပါတယျ။ပရိသတျတှရေဲ့ ပို့သတဲ့မတ်ေတာကွောငျ့ သူမတို့မိသားစုလေးအ ရငျလိုပြျောပြျောရှငျရှငျပွနျနထေိုငျနိုငျဖို့အတှကျ ပရိသတျကွီးနဲ့အတူ ဆုတောငျပေးကွရအောငျ နျော….
အားလုံးက ချစ်စနိုးနဲ့ အူဝဲလို့ ခေါ်တဲ့ သူမ ကိုတော့ ၁၉၇၇ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၄ရက် နေ့မှာ မှေးဖွားခဲ့ပါတယ်.. မိဘတွေကတော့ ဦးကျော်ဇင်နဲ့ ဒေါ်မြသီတာတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးချင်းသုံးဦးရှိပြီး သူမက တော့ အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါ တယ်။ သူမရဲ့ဇာတိက တော့ ရန်ကုန်မြို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့မိဘမျိုးရိုးကို ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ သူမဟာခုထက်ထိ နာမည်ကျော်ကြားနေဆဲဖြစ်တဲ့ စာရေးဆရာကြီး ဒဂုန်တာယာရဲ့တူမ ဖြစ်ပါတယ်။
ရဲဘော်သုံးကျိပ်အဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်ဇေယျရဲ့မြေး တော်စပ်သူ လည်း ဖြစ်ပါတယ်.မင်းသားကြီးကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း တူမတော်စပ်ဖြစ်ပြီး ရာဇာနေဝင်းနဲ့ ဟေမာနေဝင်းတို့နဲ့လည်း အမျိုးတော်စပ်သူပဲဖြစ်ပြီး ပိုင်ဇေရဲထွန်း မောင်နှမဝမ်းကွဲ တော်စပ်သူဖြစ်ပါတယ် ။ သူမရဲ့အပြုံးချိုချိုလေးတွေနဲ့အတူ သရုပ်ဆောင် ကောင်းမှုတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ရင် ထဲမှာနေရာတစ် နေရာကို ယူထားနိုင်ပြီးအကယ် ဒမီဆုတွေကို ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာလျှောက်လှမ်းနေရင်းနဲ့ မြန်မာ့မင်းသားထဲမှာထိပ်ဆုံးကအောင်မြင်နေတဲ့မင်းသားဖြစ်သူပြေတီဦး နဲ့ရွေလက်တွဲပြီး အောင်မြင်ပြီးလူတိုင်းက အားကျရတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို သမီးလေးတစ်ယောက် သားလေးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူမကတော့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးအဖြစ် ရေမွေးနဲ့ အိတ်တွေ ကိုလည်း သူမအမည် နဲ့တင်သွင်းတဲ့အလု ပ်ကိုလ ည်း လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ခုလက်ရှိမှာတော့ သူမရဲ့ကိုယ်ထဲမှာ စီးဆင်းနေတဲ့မတရားမှုကို ငြိမ်ကြည့်နေလို့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့် သူမတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ အဖမ်းခံထား၇တာ ဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေရဲ့ ပို့သတဲ့မေတ္တာကြောင့် သူမတို့မိသားစုလေးအ ရင်လိုပျော်ပျော်ရွင်ရွင်ပြန်နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ပရိသတ်ကြီးနဲ့အတူ ဆုတောင်ပေးကြရအောင် နော်….
ရငျခုနျစရာကောငျးလှနျးပွီး သူမတူ တဲ့ အလှတရားတှေ နဲ့ ကွညျ့မိသူတိုငျးကို ကွှစေပွေနျတဲ့ M Seng Lu
ပရိသတ်တွေအတွက် ဆက်ဆီကျကျ အမိုက်စား ပုံစံလေး နဲ့ အမြင်ဆန်းအောင်ရိုက်တာတဲ့ ပုံတွေကို တင်ပေး လိုက်တဲ့ မော်ဒယ် မျက်ဝန်း